I-Apple TV 4K entsha iyasivumela, okokuqala ngqa, ukuba singene kwikhontrakthi yeApple Care + | Ndisuka mac
Ngokumiliselwa kwesizukulwane sesithandathu seApple TV, uApple uthathe ithuba lokumilisela, okokuqala, ukubanakho thenga i-Apple yokugubungela le fowuni, isixhobo esilawulwa yiprosesa ye-A12 Bionic kunye ne-HDMI 2.1 yokuphuma kwezibuko, ezimbini zezona zinto zintsha zintsha kunye nokuvuselelwa kweSiri kude.
Eli lixesha lokuqala ukuba iApple inike abathengi bayo ithuba lokuthenga ukwanda kweApple TV. I-AppleCare + ibonelela ngeminyaka emi-3 yokugubungela okongeziweyo ukusukela kumhla wokuthenga kunye nomonakalo ngengozi. Ngaphambili, inikwe kuphela iAppleCare, ngeminyaka emibini yokugubungela kwaye akukho monakalo wengozi.
I-AppleCare + ayifumaneki kuphela kwisizukulwana esitsha se-6 se-Apple TV +, kodwa ikwa-tSinokuyiqesha kwakhona ukuba sikhetha i-Apple TV yesizukulwana sesi-4, okanye iApple TV HD njengoko iApple iyibiza njalo, imodeli ngokumangalisayo ukuba iApple ikhethe ukuqhubeka nokuthengisa ngelixa igcina ixabiso endaweni yokunciphisa ixabiso lemodeli yesizukulwane sesi-5 sanamhlanje esinempawu ezininzi.
Ixabiso leApplCare + yeApple TV ngama-29 euros, kuzo zombini iimodeli zeHD kunye nemodeli yesi-4 yesizukulwane se-6K. Le inshurensi yandisa iwaranti yesixhobo ngeminyaka emi-3 emva kweminyaka emi-2 ngokomthetho, sinabo bonke abasebenzisi kwi-European Union (e-United States iwaranti ingunyaka omnye).
Amaxabiso e-Apple TV 4K ngeAppleCare +
I-Apple TV4K ene-32GB yokugcina, inexabiso kwi 199 euro ngelixa Imodeli engama-64 GB inyukela kwi-219 euro. Ukuba sifuna ikhontrakthi yeAppleCare +, kufuneka songeze enye i-euro ezingama-29 ezongezelelweyo.
Ukuba sikhetha i-Apple TV HD (imodeli ayikhuthazwa kwaphela), kuyakufuneka sihlawule ii-euro ezingama-159 ezixabisa uguqulelo lwama-32 GB (kuphela uhlobo olukhoyo) ukongeza kwii-euro ezingama-29 ukuba sifuna ikhontrakthi yeAppleCare +.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple TV 4K entsha iyasivumela, okokuqala ngqa, ukuba singene kwikhontrakthi yeApple Care +
Ngaba uyiphosile intetho yangezolo? Apha ungayibona kwakhona